dWeb.News - dWeb ဒေသခံနည်းပညာသတင်းနှင့်စီးပွားရေးသတင်း
dWeb ဒေသခံ Tech သတင်းနှင့်စီးပွားရေးသတင်း
Facebook က တွစ်တာ Instagram ကို
# စီးပွားရေး | စီးပွားရေး | အပိုင်း B စီးပွားရေးသတင်း
ByDaniel Webster	 စက်တင်ဘာလ 27, 2021
ဆက်ဖတ်ရန် ASIA NEWS: Legend Capital is reaping the rewards in its logistics and supply chain investmentဆက္သြား
ဆက်ဖတ်ရန် ASIA NEWS: Crypto Financial Services Firm Blofin Raises US$12 Million Series A2 Led by KuCoin Eco Fundဆက္သြား
ဆက်ဖတ်ရန် ASIA NEWS: Metech Enters Into Joint Venture to Manufacture and Distribute Lab-Grown Diamondsဆက္သြား
ဆက်ဖတ်ရန် ASIA NEWS: Researchers Present Key Research Results on Diabetes Remission of Dorzagliatinဆက္သြား
#အားကစား | ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ | NFL | အပိုင်း S အားကစားသတင်း | အားကစား
NFL အားကစားများ၊ ၂၀၂၁ NFL ရာသီ၊ အပတ် ၂ - တနင်္ဂနွေနေ့ကစားနည်းများမှကျွန်ုပ်တို့သင်ယူခဲ့သောအရာများ - NFL.com
ByLloyd Serna	 စက်တင်ဘာလ 27, 2021
The NFL ပတ် ၀ န်းကျင်သည် ၂၀၂၁ NFL ရာသီအပတ်တနင်္ဂနွေ၏လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးမှသင်သိရန်လိုအပ်သည်ကိုဖြိုခွဲသည်။ Green Bay Packers 3, San Francisco 2021ers 30 Los Angeles Rams 49, Tampa Bay Buccaneers 28 Minnesota Vikings 34, Seattle Seahawks, Green Bay Packers 24, San Francisco 30ers XNUMX၊
ဆက်ဖတ်ရန် NFL အားကစားများ၊ ၂၀၂၁ NFL ရာသီ၊ အပတ် ၂ - တနင်္ဂနွေနေ့ကစားနည်းများမှကျွန်ုပ်တို့သင်ယူခဲ့သောအရာများ - NFL.comဆက္သြား
#လူမှုမီဒီယာ | အပိုင်း Q Quick Coms လူမှုမီဒီယာသတင်း | လူမှုမီဒီယာ
ByFacebook က	 စက်တင်ဘာလ 27, 2021
ဆက်ဖတ်ရန် SOCIAL MEDIA: Pausing “Instagram Kids” And Building Parental Supervision Toolsဆက္သြား
#ရှေ့စာမျက်နှာ | အပိုင်းကရှေ့စာမျက်နှာအဓိကသတင်း
ဆက်ဖတ်ရန် Front Page: Going Hyperspectral For CHIMEဆက္သြား
စီးပွားရေးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရုတ်မော်တော်ကား T-Box ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအစီရင်ခံစာ 2021
စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၁ ၀၆: ၅၈ ET | အရင်းအမြစ်၊ သုတေသနနှင့်စျေးကွက်အရွယ်အစားစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၅G ထောက်ခံမှု ၄G အထောက်အပံ့ V27X အထောက်အပံ့တည်နေရာအထောက်အပံ့အာရုံခံထောက်ကူမှုပေါင်းစည်းအင်တာနာများပေါင်းစည်းထားသောဗဟိုတံခါးများကွန်ယက်လုံခြုံရေးနှင့်စာဝှက်စနစ်ယာဉ်ချိတ်ဆက်မှု OTA ကိုထောက်ပံ့ခြင်းအဝေးထိန်းစနစ် API interface အထောက်အပံ့သိုလှောင်နိုင်မှုအခြေအနေအထောက်အထားခိုင်လုံမှုထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားအရေအတွက်သတ်မှတ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများထုတ်လုပ်ခြင်းအစရှိသဖြင့်တို့ကအဓိကကျသည်။ T-BOX မှာ ...
ဆက်ဖတ်ရန် စီးပွားရေးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရုတ်မော်တော်ကား T-Box ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအစီရင်ခံစာ 2021ဆက္သြား
လုပ်ငန်း - Dėl„ Amber Grid“ Neeilinio Visuotinio Akcininkų Susirinkimo Priimto Sprendimo
AB "Amber Grid", juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Savanorių pr ။ 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva ၂၀၂၁ မီတာ rugsėjo ၂၇ ရက် įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB "Amber Grid" (įmonės kodas 2021, မှတ်ပုံတင်စာရင်းများbuveinės adresas Savanorių pr ။ 27, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas: 303090867. Dėl AB bumim ။ Priimtas sprendimas:„ ၁ ။ Pakeisti AB "Amber Grid" (တရား ၀ င် ...
ဆက်ဖတ်ရန် လုပ်ငန်း - Dėl„ Amber Grid“ Neeilinio Visuotinio Akcininkų Susirinkimo Priimto Sprendimoဆက္သြား
စီးပွားရေး: Amber Grid ၏ရှယ်ယာရှင်များ၏ထူးကဲသောအထွေထွေအစည်းအဝေး၌ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်
AB Amber Grid၊ ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းကုဒ်: ၃၀၃၀၉၀၈၆၇ ။ လိပ်စာ: Savanorių pr ။ 303090867, LT-28 Vilnius, လစ်သူယေးနီးယား ၂၀၂၁ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် AB Amber Grid ၏ထူးထူးခြားခြားအထွေထွေရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေး၌အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့သည်။
ဆက်ဖတ်ရန် စီးပွားရေး: Amber Grid ၏ရှယ်ယာရှင်များ၏ထူးကဲသောအထွေထွေအစည်းအဝေး၌ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်ဆက္သြား
စီးပွားရေး: သက်သာစေသောပလာစမာကုထုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၁: COVID-2021 သက်ရောက်မှုများနှင့် ၂၀၃၀ အထိ
၂၀၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၇ နယူးယောက် https://www.reportlinker.com/p06151638/?utm_source=GNWThe ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြန်လည်နာလန်ထလာစေသောပလာစမာကုထုံးစျေးကွက်သည် ၂၀၂၀ တွင်ဒေါ်လာ ၀.၀၂၆ ဘီလီယံမှ ၂၀၂၁ တွင်ဒေါ်လာ ၀.၀၂၈ ဘီလီယံအထိတိုးလာလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် စီးပွားရေး: သက်သာစေသောပလာစမာကုထုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၁: COVID-2021 သက်ရောက်မှုများနှင့် ၂၀၃၀ အထိဆက္သြား
စီးပွားရေး: ၂၀၂၈ တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Leukapheresis စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ဒေါ်လာ ၁၃၃.၉ သန်းအထိရောက်ရန်မျှော်မှန်းထားသည်။
ဒပ်ဘလင်၊ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၁ (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်းများ)-၂၀၂၈ ခုနှစ်အထိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Leukapheresis စျေးကွက်ခန့်မှန်းချက်-COVID-27 သက်ရောက်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအားဖြင့် ResearchAndMarkets.com ၏ကမ်းလှမ်းချက်တွင်သုံးစွဲသူ” အစီရင်ခံစာကိုထည့်ပြီးပါပြီ။ leukapheresis စျေးကွက်သည်ဒေါ်လာ ၁၃၃.၉၀ သန်းအထိရောက်ရန်မျှော်မှန်းထားသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် စီးပွားရေး: ၂၀၂၈ တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Leukapheresis စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ဒေါ်လာ ၁၃၃.၉ သန်းအထိရောက်ရန်မျှော်မှန်းထားသည်။ဆက္သြား
လုပ်ငန်း-Influenza Diagnostic Global Market Report 2021: COVID-19 သက်ရောက်မှုနှင့် ၂၀၃၀ အထိ
နယူးယောက်၊ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၁ https://www.reportlinker.com/p06151640/?utm_source=GNW GenMark Diagnostics ကမ္ဘာ့တုပ်ကွေးရောဂါရှာဖွေရေးစျေးကွက်သည် ၂၀၂၀ တွင်ဒေါ်လာ ၁.၃၁ ဘီလီယံမှ ၂၀၂၁ တွင်ဒေါ်လာ ၁.၃၃ ဘီလီယံအထိတိုးလာလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် လုပ်ငန်း-Influenza Diagnostic Global Market Report 2021: COVID-19 သက်ရောက်မှုနှင့် ၂၀၃၀ အထိဆက္သြား
လုပ်ငန်း-ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် VSaaS စျေးကွက်သည် ၂၀၂၇ ခုနှစ်အထိ-Analog နှင့် IP အခြေပြုထုတ်ကုန်များကိုအာရုံစိုက်ပါ။
ဒပ်ဗလင်၊ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၁ ကာကွယ်ရေး၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း) နှင့်ပထဝီဝင် - ၂၀၂၇ အထိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခန့်မှန်းချက်အစီရင်ခံစာကို ResearchAndMarkets.com ၏ကမ်းလှမ်းချက်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် VSaaS စျေးကွက်…
ဆက်ဖတ်ရန် လုပ်ငန်း-ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် VSaaS စျေးကွက်သည် ၂၀၂၇ ခုနှစ်အထိ-Analog နှင့် IP အခြေပြုထုတ်ကုန်များကိုအာရုံစိုက်ပါ။ဆက္သြား
# စီးပွားရေး | စီးပွားရေး | သတင်းထုတ်ပြန်ချက် | အပိုင်း B စီးပွားရေးသတင်း
စီးပွားရေး: နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုသုတေသီသည်မီးရှို့ပြီးအလုပ်လုပ်သောအမေအတွက်ပင်ပန်းမှုဖြေရှင်းနည်းများတွင်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်စကားပြောခြင်း Podcast အသစ်တစ်ခုကိုစတင်သည်။
San Diego, CA, September 27, 2021 - (PR.com) - နှစ်စဉ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Podcast တစ်ခုဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာ ၃၀ မှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ podcasters တွေကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ San Diego မှာအခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံတကာ podcaster အသစ်ကိုငါတို့ကြိုဆိုပါတယ်။ ဗြိတိန်မှ Jacqueline Kerr သည်ကမ္ဘာကျော်လူထုကျန်းမာရေးသုတေသီဖြစ်ပြီးကိုးကားချက်အများဆုံး ၁% တွင်ရှိသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် စီးပွားရေး: နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုသုတေသီသည်မီးရှို့ပြီးအလုပ်လုပ်သောအမေအတွက်ပင်ပန်းမှုဖြေရှင်းနည်းများတွင်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်စကားပြောခြင်း Podcast အသစ်တစ်ခုကိုစတင်သည်။ဆက္သြား
BUSINESS: The Gateway Family YMCA သည်ပျော်ရွှင်မှု၊ ရယ်သံများနှင့်သူငယ်ချင်းများမှတဆင့်အဆစ်ရောင်ရောဂါကိုကုသပေးသောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဲလိဇဘက်၊ NJ၊ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၁-(PR.com)-The Gateway Family YMCA သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများအထူးသဖြင့်အဆစ်နာရှိသူများကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုတိုးတက်စေကြောင်းသက်သေပြသည့်အထောက်အထားအခြေပြုကာယလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများသို့အမေရိကန် ၅၂ သန်းသည်အသက်အရွယ်ကြီးသူအားလုံး၏ထက်ဝက်ခန့်အပါအ ၀ င်အဆစ်ရောင်ရောဂါရှိသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် BUSINESS: The Gateway Family YMCA သည်ပျော်ရွှင်မှု၊ ရယ်သံများနှင့်သူငယ်ချင်းများမှတဆင့်အဆစ်ရောင်ရောဂါကိုကုသပေးသောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ဆက္သြား
BUSINESS: Neo Soul အသံသွင်းအနုပညာရှင် Akeylah Simone သည် Act Act Contest ဖွင့်ပွဲအတွက်ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်
Hampton Roads, VA, September 27, 2021-(PR.com)-အဆိုတော်၊ တေးရေးဆရာနှင့်အသံသွင်းအနုပညာရှင် Akeylah Simone သည်သူမဟာယခုဖွင့်ပွဲအက်ဥပဒေပြိုင်ပွဲတွင်နောက်ဆုံးဆန်ခါတင်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာသည်။ ပြိုင်ပွဲ၏အနိုင်ရရှိသူသည် Audacy ၏နှစ်ပတ်လည်တွင်ဖျော်ဖြေလိမ့်မည်။ Los Angeles ရှိကမ္ဘာကျော် Hollywood Bowl ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ Taylor Swift, Lizzo, Billie Eilish နှင့် ...
ဆက်ဖတ်ရန် BUSINESS: Neo Soul အသံသွင်းအနုပညာရှင် Akeylah Simone သည် Act Act Contest ဖွင့်ပွဲအတွက်ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ဆက္သြား
လုပ်ငန်း-ဂုဏ်ယူ ၀ မ်းနည်းခြင်း ၁-၂-ဖိနပ်မြှင့်ခြင်း (၄၅ နှစ်)
Bellevue, WA၊ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၁-(PR.com)-Booktoots 'Healing ၏ပိုင်ရှင် Marie Buckner သည် "ငါ့ ၄၅ နှစ်ဖိနပ် ၁-၂ ဖိနပ် ၀ တ်ခြင်း ၀ တ်ခြင်း ၄၅ နှစ်ရှိ" ebook စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိကြောင်းကြေငြာရန်ဂုဏ်ယူသည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်သူမကဤသို့ဖော်ပြသည် -“ သိသာထင်ရှားတဲ့ဖိနပ်ကို ၄၅ နှစ်ကြာ ၀ တ်ဆင်ခြင်းကအခြားသူတွေကိုဘ ၀ ကိုလွယ်ကူစေနိုင်တယ်။
ဆက်ဖတ်ရန် လုပ်ငန်း-ဂုဏ်ယူ ၀ မ်းနည်းခြင်း ၁-၂-ဖိနပ်မြှင့်ခြင်း (၄၅ နှစ်)ဆက္သြား
လုပ်ငန်း -“ သင်၏ TKR အတွက်ပြင်ဆင်နေသည့်လူနာ၏အမြင်” EBook ကိုဂုဏ်ယူစွာရောင်းချပေးသည်။
Bellevue, WA၊ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၁-(PR.com)-Booktoots 'Healing ဟုလူသိများသည့်ဆုရ site Marie Buckner သည်သူမ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှု "Patient's Perspective On Preparing For" ကိုထုတ်ဝေခဲ့သော ebook version ကိုကြေငြာရန်ဂုဏ်ယူသည်။ မင်းရဲ့ TKR " လူနာတစ် ဦး ရေးသားသောလူနာအတွက်ဤ ebook သည် pre-op မှတဆင့်သွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ပိုင်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုမှရရှိသောတန်ဖိုးရှိသောအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။
ဆက်ဖတ်ရန် လုပ်ငန်း -“ သင်၏ TKR အတွက်ပြင်ဆင်နေသည့်လူနာ၏အမြင်” EBook ကိုဂုဏ်ယူစွာရောင်းချပေးသည်။ဆက္သြား
စီးပွားရေး: Gateway မိသားစု YMCA သည်ကလေးဘဝအဝလွန်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်အစီအစဉ်များကိုပေးသည်
ပြည်ထောင်စု၊ NJ၊ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၁ - (PR.com) - ကလေးသူငယ်များအဝလွန်ခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာလအတွက် The Gateway Family YMCA သည်ကျန်းမာသောအစီအစဉ်ရွေးချယ်စရာများကိုလူထုအားအသိပေးရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအဝလွန်ခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုဆက်လက်ဖော်ပြနေသော်လည်းမိသားစုများစွာသည်အဝလွန်ကလေးများနှင့်ကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန်ရရှိရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ပန်းတိုင်သို့မိသားစုများစွာ၏အလေ့အကျင့်များကိုပြောင်းလဲရန်အထောက်အပံ့လိုအပ်သည်။
ဆက်ဖတ်ရန် စီးပွားရေး: Gateway မိသားစု YMCA သည်ကလေးဘဝအဝလွန်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်အစီအစဉ်များကိုပေးသည်ဆက္သြား
123 ... 2,794 နောက်တစ်ခု
© ၂၀၂၁ dWeb.News မှ Daniel Webster | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
ကလေး menu ကိုချဲ့ပါExpand